2021Ukubambisana kwe-IWCA @ CCCC - Umbutho wamaZiko okuBhala wamanye amazwe
INgqungquthela yoNyaka ye-IWCA ka-2021 (ngo-Okthobha 20-23)
2021 IZiko lasehlotyeni
2021Ukusebenzisana kwe-IWCA @ CCCC
date: NgoLwesithathu, ngo-Epreli 7, 2021 ukusuka nge-10 kusasa ukuya kwi-4: 15 PM
Programme: Nceda ubone ifayile ye Inkqubo ye-2021 ye-IWCA yokuNxibelelana kwi-Intanethi ngolwazi malunga neseshoni nganye.
Indlela: Iiseshoni zoSondeza zoLungelelwaniso kunye neeVidiyo zeAsynchronous. Ukufumana izikhokelo kuphuhliso lwentetho ebukhoma okanye ye-asynchronous, bona Isikhokelo sokuFikelela soMbonisi esiFikelela kude.
ubhaliso: $ 15 kwiingcali; $ 5 kubafundi. Tyelela iwcamembers.org ukubhalisa.
Ukuba awulolungu, kuya kufuneka kuqala ujoyine umbutho. Tyelela iwcamembers.org ukujoyina umbutho.
Ubulungu babafundi yi- $ 15.
Ubulungu bobuchwephesha yi- $ 50.
Ngenxa yokuba iseshoni yethu yamalungu onke ibaluleke ngokukodwa kwii-WPAs, simema iziko le-WPA ezingabhaliyo ukuba lijoyine umbutho kwinqanaba lobulungu babafundi ($ 15) kubulungu bosuku olunye ukuya kwiNtsebenziswano. Emva kokujoyina, baya kudinga ukubhalisela umsitho kwinqanaba lobungcali ($ 15).
Uluhlu lwamalungu iKhusi ngu-Courtney Adama Wooten, uJacob Babb, uKristi Murray Costello, kunye noKate Navickas, abahleli be Izinto esizithwalayo: Iindlela zokuqonda kunye nokuThetha-thethana ngezeMisebenzi kuLawulo lweNkqubo yokuBhala
Izitulo: UGqirha Genie Giaimo, Middlebury College, kunye UYanar Hashlamon, KwiYunivesithi yaseOhio State
umxholo: IiNdawo zoNxibelelwano kwiZiko lokuBhala loMsebenzi
Ngengqiqo efanelekileyo, imimandla yokunxibelelana zizithuba apho sifumana khona ukuvumelana kunye nokufana phakathi kokungafani. Ngokwenyani, sizimisele kodwa mhlawumbi asizifumani. Phakathi kwengxwabangxwaba yangoku efunyanwa ngabafuduki kwimozulu yethu yezopolitiko, kubalulekile ukuqaphela ukuba iindawo zokukhula kunye nethuba labanye ziindawo zokuxhaphaza nokukhuphela abanye. Umhlaba weqela elinye lamathuba kukuhluthwa kwelinye.
Ukugcina oku engqondweni, sicebisa ukuba imimandla yoqhakamshelwano yimodeli efanelekileyo yokujonga uxinzelelo lomsebenzi wokubhala weziko kunye ithiyori. Iindawo zoqhakamshelwano “ziindawo zentlalo apho iinkcubeko zidibana khona, zingquzulana, kwaye zisukuzane, ngokufuthi kwiimeko zobudlelwane obunamandla kakhulu” (Pratt 607). Kumsebenzi weZiko lokuBhala, imimandla yoqhakamshelwano iye yasasazwa liqela labaphengululi kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, bebeka amaziko ngokwawo njenge "mida," okanye iilwimi, iinkcubeko ezahlukeneyo, kunye nemimandla yonxibelelwano eyahlukeneyo (Severino 1994; Bezet 2003; Sloan 2004; Monty 2016 ). Abanye abaphengululi benze amaziko okubhala njengemimandla ebaluleke kakhulu kunye ne-postcolonial yababhali ababekelwe bucala ukuba bazimise ngokunxulumene neentetho eziphambili (iBawarshi kunye nePelkowski 1999; iWolff 2000; uKayin 2011). U-Romeo García (2017) ubhala ukuba iZiko eliBhalayo leendawo zonxibelelwano zihlala ziboniswa njenge-static kwaye zimele ukungalingani njengezinto ezinqamlezileyo okanye zempikiswano ekufuneka zisonjululwe okanye zilungiselelwe (49). Ukwenza izithuba ezingaphezulu, kufuneka sivavanye ukungavisisani emsebenzini wethu kwaye sijongane nemimandla yoqhakamshelwano njengokutshintsha kunye nomlando. Imbali kunye neendawo zokungabikho kokusesikweni zisibiza ukuba siqwalasele indlela okusekwa ngayo ukubambiselana kweziko kunye nokungqongqo kubumba abasebenzi indlela ukuziqhelanisa kunye nethiyori enokuthi ibe nokungqubana omnye komnye emsebenzini wethu; indlela abasebenzi nabathengi bethu abasesichengeni ngayo abanamava okubhala kunye neziko lokubhala; kunye nendlela imibutho yombutho echaphazela ngayo ukubandakanyeka kokuziphatha kwiziko lokubhala lokufundisa. Ngamanye amagama, kufuneka siqwalasele indlela imimandla yoqhakamshelwano ngaphakathi kunye namaziko okubhala ajikelezileyo, anje ngeziko elibanzi, uRhulumente, urhulumente, namanye amacandelo ombane abachaphazela ngayo abasebenzi bethu kunye nokusebenza kwethu.